New Journey to The West: Season 8 – Variety Myanmar
Watch full episodes New Journey to The West: Season 8, download New Journey to The West: Season 8 english subbed, New Journey to The West: Season 8 eng sub, download New Journey to The West: Season 8 eng sub, stream New Journey to The West: Season 8 at Variety Myanmar.
New Journey to the West 8 , Sinseoyugi
Status: Ongoing Network: tvN, XtvN Released: Oct 9, 2020 - ? Duration: 1 hr. 40 min. Country: South Korea Type: TV Show Episodes: 11 Posted by: Thomas Nicolas Released on: October 21, 2020 Updated on: November 5, 2020
Watch streaming New Journey to The West: Season 8 English Subbed on Variety Myanmar. You can also download free New Journey to The West: Season 8 Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, New Journey to The West: Season 8 on Variety Myanmar MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.
Synopsis New Journey to The West: Season 8
New Journey to the West Season 8 ( Myanmar Subtitle )
ဒီShowလေးကိုတော့ Reality Showကြည့်တဲ့သူတွေဆိုရင် သိကြဖို့များပါတယ်
ဒီ Showလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ seasonတစ်ခုကိုthemeတစ်ခုပြောင်းပါတယ်
အခု seasonဖြစ်တဲ့ season 8မှာတော့Koreaရဲ့ traditional fairy taleဖြစ်တဲ့Heungbu နဲ့ Nolbuအကြောင်းကိုအခြေခံထားတာပါ
ဒီ fairy taleလေးကိုတော့ဂျိုဆွန်းနှောင်းပိုင်း(၁၃၉၂-၁၈၉၇)ကအမည်မသိစာရေးဆရာတစ်ဦးကရေးသားခဲ့တာပါ
ဒီပုံပြင်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပါမယ် ဒီပုံပြင်လေးမှာတော့ Heungbu နဲ့ Nolbuတို့ကညီအစ်ကိုတွေပါ
သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကမှ Nolbuကအစ်ကိုကြီးဖြစ်ပါတယ် အစ်ကိုကြီးဖြစ်တဲ့Nolbuကအရမ်းကိုလောကြီးပါတယ်
ဒါပေမယ့်ညီဖြစ်သူHeungbuကတော့ ကြင်နာပြီး တစ်ဖက်သားကိုစာနာတတ်ပါတယ်
သို့ပေမယ့် လောဘအရမ်းကြီးတဲ့Nolbuအနေနဲ့Heungbuမိသားစုကိုလှည့်စားပြီး မောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်
တစ်နေ့မှာHeungbuက သူ့အိမ်နားမှာမြွေတစ်ကောင်က သစ်ပင်ပေါ်ကပျံလွှားငှက်ကိုစားဖို့လုပ်နေတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်
ဂန်ဟိုဒုံက Heungbuရဲ့သား ၊လီဆူဂွန်းက ဘူးသီး၊ အွန်ဂျီဝန်းက ပျံလွှားငှက် ၊ချိုကျုရန်းက Nolbuရဲ့မိန်းမ ၊
ဆုန်းမင်နိုက Heungbuနဲ့ P.Oက Nolbuအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ
Synopsis : Phone Htet Kyaw
Translator : Kwon Lye
Subtitle : Burmese (Hardsub)
Video Source : 1080p.WEB-DL-Deresisi
Resolution : 720p HD, 1080p FHD
Download New Journey to The West: Season 8 Episodes
Ep 1 720p,1080p Download
Watch New Journey to The West: Season 8